सर्वश्रेष्ठ पृष्ठहरू डाउनलोड गर्न स्पेनिश उपशीर्षकहरू ग्याजेट समाचार
सर्वश्रेष्ठ पृष्ठहरू स्पेनिश उपशीर्षक डाउनलोड गर्न
पाब्लो अपारीसियो | | सामान्य
हामी सबैलाई फिल्म र श्रृंखला मनपर्दछ, हैन? तर त्यहाँ तिनीहरूलाई हेर्न तरिकाहरू र तरिकाहरू छन्। हामी यसलाई सिनेमामा वा घरमै देख्न सक्दछौं, मूल वा उपशीर्षक संस्करणमा, र प्रत्येक तरिकामा यसको फाइदा हुन्छ। चलचित्रमा हामी फिल्मलाई एक ठूलो पर्दामा र एउटा शानदार र सन्निहित ध्वनीको साथ देख्दछौं; घरमा हामी यसलाई सहजै देख्नेछौं र जब हामी चाहान्छौं। यदि हामीले यसलाई हाम्रो भाषामा देख्यौं भने हामीले केही पनि बुझ्ने प्रयास गर्नुपर्दैन; यदि हामीले यसलाई उपशीर्षकहरूसँग देख्यौं भने हामी 100% व्याख्याको आनन्द लिनेछौं। यसैले हामी मध्ये धेरैले आफ्नो मूल उपशीर्षक संस्करण (कम्तिमा समय समयमा) मा फिल्महरू र श्रृंखलाहरू हेर्न मन पराउछौं। म कहाँ फिल्महरू वा श्रृंखलाहरूको लागि उपशीर्षकहरू डाउनलोड गर्न सक्छु?
तल हामी वेबसाइटहरूको सूची राख्दछौं जहाँ तपाईं फेला पार्न सक्नुहुन्छ स्पेनिश उपशीर्षकहरू चलचित्र र श्रृंखला को लागी। सामान्यतया, यी सूचिहरूले महत्वका क्रममा वेबसाइटहरू थप्दैनन्, तर यो समय यो हुनेछ। कम्तिमा पहिलो स्थान, एक उपशीर्षक खोजीकर्ता अवस्थित हुनुपर्दछ, एक वेबसाइट जुन धेरै वेबसाइटहरूमा उपशीर्षकहरू खोज्न जिम्मेवार छ र यो डाटाबेसमा उपशीर्षकहरूको लागि रेकर्ड छ। म तपाईंलाई सूचीको साथ छोडिदिन्छु।
1 उपशीर्षक खोजी
4 स्पेनिश उपशीर्षकहरू
6 उपशीर्षकहरू खोल्नुहोस्
7 चलचित्र र टिभी उपशीर्षकहरू
8 कसरी हाम्रा भिडियोहरूमा उपशीर्षकहरू थप गर्ने
यदि तपाईं उपशीर्षकहरू खोज्दै हुनुहुन्छ भने, तपाईंले उपशीर्षक खोजीकर्ता सुरू गर्नु पर्छ। व्यावहारिक रूपमा सबै कुरा पाउनुहोस्। यो बारे मा छ Million मिलियन उपशीर्षक तपाईंले तिनीहरूलाई अन्य धेरै उपशीर्षक वेबसाइटहरूमा खोजी गरेर पाउनुहुन्छ। हामी भन्न सक्दछौं कि उपशीर्षक खोजीकर्ता उपशीर्षकहरूको गुगल हो। उनीहरूको मूल भाषामा खोजी गर्न सिफारिस गरिन्छ, तर यो लायक छ। यो छिटो, सरल र प्रभावी छ।
पोडनापिसीसँग केहि छ एक मिलियन भन्दा बढी उपशीर्षक बहु भाषाहरूमा। यो एक प्रामाणिक हो फोरम समुदाय र सक्रिय अनुवाद समूहहरू। थप रूपमा, र यो आकारको समुदायमा यो अन्यथा कसरी हुन सक्दछ, हामी अनुरोध गर्न सक्छौं उपशीर्षकहरू जुन उनीहरूको डेटाबेसमा छैनन् उपशीर्षकहरू प्रमाणीकरण फिल्टरहरूको श्रृ through्खला मार्फत जान्छन्, केहि प्रशंसनीय छ। समस्या अ the्ग्रेजीमा गर्नु पर्ने हुन्छ।
सब्समेक्स एक खोज ईन्जिनको साथ हो १ XNUMX लाख भन्दा बढी उपशीर्षकहरू। यसमा समस्या छ, र त्यो यो हो कि यसले हामीलाई धेरै खोज परिणामहरू देखाउँदछ यदि हामी पाठको साथ सटीक छैनौं भने। तर यदि हामीले सहि नाम राख्यौं र, सम्भव भएमा, वर्ष, हामी लगभग कुनै पनि चलचित्र र श्रृंखलाहरूको लागि उपशीर्षकहरू फेला पार्न सक्छौं। यसमा पुरानो श्रृंखलाको उपशीर्षकहरू उपलब्ध छन्, तर अंग्रेजीमा यसको मूल नाम राख्न उत्तम हो।
स्पेनिश उपशीर्षकहरूमा हामी धेरै चलचित्रहरू र श्रृंखलाहरूको लागि उपशीर्षकहरू फेला पार्नेछौं। हामी कुनै पनि बर्षको फिल्महरूको उपशीर्षकहरू भेट्टाउनेछौं र श्रृंखला के हो जुन धेरै पुरानो वा अज्ञात छैन। साथै, तपाईले स्क्रिनसटमा देख्न सक्नुहुने रूपमा, यो म्यानुअल्ली खोजी प्रविष्ट गर्न आवश्यक छैन, तर हामी यसलाई चार क्लिकमा गर्न सक्छौं, एउटामा «स्वचालित खोज«, अर्कोमा« भिडियो फाइल चयन गर्नुहोस् », अर्को फाईलमा र अर्को« Ok »मा। सरल, असम्भव। अवश्य पनि, फाईलसँग फिल्मको नाम वा श्रृ series्खलाको नाम हुनुपर्दछ वा यसले केही पनि फेला पार्ने छैन।
सबडिभक्स अर्को वेबसाइट हो जुन दुबै श्रृंखला र चलचित्रहरूका लागि उपशीर्षकहरूको एक ठूलो क्याटलग हो। अरु के छ त, प्रयोगकर्ताहरूले मूल्य दिन सक्छन् उपशीर्षकहरूको गुणस्तर, केही जुन हामीलाई एक वा अर्को छनौट गर्न मद्दत पुर्‍याउँछ र (यो मानिन्छ) तिनीहरू मूल पाठमा अधिक विश्वासी हुनेछन्। योसँग एक धेरै साधारण इन्टरफेस छ, त्यसैले हामी छिटो र सजीलो उपशीर्षकहरू फेला पार्न र डाउनलोड गर्न सक्दछौं।
खुला उपशीर्षकहरू छन् दुई लाख भन्दा बढी उपशीर्षकहरू दुबै श्रृंखला र चलचित्रहरूका लागि। स्पेनिशको अतिरिक्त, उपशीर्षकहरू बहु भाषाहरूमा छन्। यो एक समुदाय हो र, जस्तै हामी उपशीर्षकहरू सोधेर योगदान गर्न सक्दछौं जुन उनीहरूको डेटाबेसमा छैन। धेरै जसो फिल्महरू तिनीहरूका मूल नाममा हुन्, त्यसैले अंग्रेजी शीर्षक खोज्नु राम्रो हुन्छ यदि चलचित्र वा श्रृंखला अंग्रेजी बोल्ने हो भने।
चलचित्र र टिभी उपशीर्षकहरू
चलचित्र उपशीर्षक र टिभी उपशीर्षक दुई फरक पृष्ठ हो, तर बहिनीहरू। तिनीहरूमा हामी चलचित्रहरू र श्रृंखलाहरूको उपशीर्षकहरू भाषाको एक राम्रो संख्यामा फेला पार्न सक्छौं। समस्या, धेरै जसो वेबसाइटहरूमा धेरै भाषाहरूमा उपशीर्षकहरू प्रस्ताव गर्दछन्, यो हो कि हामीले फिल्मको शीर्षक वा शृंखला यसको मूल भाषामा राख्नुपर्दछ। राम्रो कुरा के हो भने उनीहरूले सबै पाउँछन्।
कसरी हाम्रा भिडियोहरूमा उपशीर्षकहरू थप गर्ने
कुनै पनि मिल्दो खेलाडीमा भिडियोहरू हेर्न सक्षम हुन, सब भन्दा साधारण भनेको यो राखेर मात्र काम गर्दछ फिल्मको रूपमा उही फोल्डरमा .srt विस्तारको साथ फाइल वा श्रृंखला जुन हामी हेर्न चाहन्छौं। .Srt फाईलसँग भिडियोको जस्तै ठ्याक्कै नाम हुनुपर्दछ, त्यसैले यदि हामी "पिशाच। र यसले केवल कम्प्युटर प्रोग्रामहरूसँग मात्र काम गर्दैन, यसले पनि उपयुक्त टेलिभिजनहरूमा कार्य गर्दछ।
लेखको पूर्ण मार्ग: ग्याजेट समाचार » सामान्य » सर्वश्रेष्ठ पृष्ठहरू स्पेनिश उपशीर्षक डाउनलोड गर्न
सबै भन्दा राम्रो हराइरहेको अर्जेन्टेमनेट हराइरहेको छ
जोसेडलाई जवाफ दिनुहोस्
डानियल जोस Pappalardo Pagani भन्यो
धन्यवाद, जानकारी एकदम सटीक र स्पष्ट छ, म तपाईंलाई सोध्ने अवसर लिन्छु, कसैले मलाई समस्या उत्पन्न गर्न मद्दत गर्न सक्छ, उदाहरण, चलचित्र वा श्रृंखला अन्तर्गत, म उपशीर्षक थप्छु, म यसलाई मेरो पीसी प्लेयरमा हेर्छु, VLC मा, र यो उत्तम टोटो, अब जब म एक DVD मा समान फाईल रेकर्ड गर्छु र यसलाई मेरो Led TV मा हेर्नको लागि पुन: उत्पादन गर्छु, चलचित्र प्ले हुन्छ तर उपशीर्षकहरूसँग होइन,
समस्या सुल्झाउन सकिन्छ कि भनेर हेर्न म कुनै पनि टिप्पणीको कदर गर्नेछु।
Daniel jose Pappalardo Pagani लाई जवाफ दिनुहोस्
Highly अत्यधिक लत खेल तपाईंको स्मार्टफोनको लागि
यदि तपाईं एक गेमर हुनुहुन्छ भने, Corsair ले तपाईंको म्याकको अधिकतम बनाउँदछ